Ezinye Izinsiza - Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie
ILLINOIS KWEZOMTHETHO USIZO LWE-inthanethi
I-Illinois Legal Aid Online inikeza izakhamizi zase-Illinois imininingwane yezomthetho esebenziseka kalula, izinto zokufunda namafomu, izinsiza-kusebenza zokuzisiza, nezinye izinto ezihlobene. Lapho, ungathola imininingwane ngamalungelo nezibopho zakho zomthetho, ukuthunyelwa emahhovisi ezinsiza zomthetho ezingabizi futhi eziphansi, namafomu nemiyalo yokuzimela.
Sicela uvakashele nguyibongile.org ukuze uthole olunye ulwazi.
IZIKHUNGO ZOKUZISIZA E-ILLINOIS
Izinkantolo eziningi “Zinezikhungo Zokuzisiza,” lapho umphakathi ungathola khona ulwazi lomthetho olunembile nolwamanje oludingayo. Abanye balaba banamatilosi noma abanye abasebenzi abangakusiza ekutholeni imininingwane efanele. Ngokuthola lolu lwazi, abantu abangenabo abameli bayakwazi ukuchaza icala labo ngokufanelekile kwijaji futhi baxazulule izinkinga zabo zomthetho bebodwa. Izikhungo eziningi zokuzisiza zitholakala enkantolo, kepha ezinye zisemitatsheni yezincwadi - chofoza isixhumanisi esingezansi ukuthola isikhungo sokuzisiza endaweni yangakini.
Chofoza lapha ukuze ubuke uhlu Lwezikhungo Zokuzisiza.
IZINKONZO ZOMTHETHO CORPORATION (LSC)
I-Legal Services Corporation (i-LSC) yinhlangano engenzi nzuzo exhaswa nguhulumeni, eyi-501 (c) (3) esungulwe yi-United States Congress. Ifuna ukuqinisekisa ukutholakala okulinganayo kwezobulungiswa ngaphansi komthetho kubo bonke abantu baseMelika ngokunikela ngezimali zosizo lwezomthetho kulabo abangeke bakwazi ukuzikhokhela. I-LSC yasungulwa ngo-1974 ngoxhaso lwe-bipartisan congressional futhi ixhaswe ngenqubo yokwabiwa kwenhlangano.
Sicela uvakashele lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid ukuthola usizo lwakho lwezomthetho lendawo.
INHLANGANO YESIZWE YOMTHETHO WOKUSIZA NOKUVIKELA (NLADA)
I-NLADA yinhlangano endala futhi engenzi nzuzo enkulu kunazo zonke yaseMelika ezinikele ekwenzeni kahle ekulethweni kwezinsizakalo zomthetho kulabo abangakwazi ukukhokhela iseluleko. Banikela ngokugqugquzela, ukuholwa, ulwazi, ukuqeqeshwa kanye nosizo lobuchwepheshe kumalungu omphakathi wezobulungiswa olinganayo, ikakhulukazi lawo asebenzela ukuvikela umphakathi kanye nosizo lwezomthetho.
Sicela uvakashele nlada.org/about-nlada ukuze ufunde kabanzi